चीनको हाइपरसोनिक मिसाइलबारे अमेरिकी अधिकारीको सनसनी बयान, मच्चियो खैलाबैला ! – Jagaran Nepal
चीनको हाइपरसोनिक मिसाइलबारे अमेरिकी अधिकारीको सनसनी बयान, मच्चियो खैलाबैला !
काठमाडौं। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका एक बरिष्ठ अधिकारीले चीनले जसरी गुपचुप तरिकाले हाइपरसोनिक मिसाइलको परीक्षण गरेको छ त्यो रुसको स्पुतनिक लञ्च जस्तो भएको बताएका छन् ।
१९५७ मा रुसले स्पुतनिक स्याटेलाइन लञ्च गरेको थियो । त्यसपछि शीतयुद्धमा अमेरिका र रुसबीच हतियारको रेस सुरु भएको थियो ।
अमेरिकी सेनाको ज्वाइन्ट चीफ अफ स्टाफका प्रमुख मार्क मिलीले यी कुरा ब्लुमबर्ग न्यूजलाई दिएको एक अन्तरवार्तामा बताएका हुन् । उनले चिनियाँ सेनामा तीब्र रुपमा विकास भइरहेको बताएका छन् ।
मार्क मिलीले भने ‘हेमिले देख्यौं कि चीनले धेरै महत्वपूर्ण हाइपरसोनिक हतियारको परीक्षण गर्यो र ठूलो चिन्ताको विषय यो हो कि यो स्पुतनिकको घटनाजस्तै छ जसले हाम्रो पूरै ध्यान आफूतर्फ तानेको छ ।’
अमेरिकी पक्षले चीनको हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणको बारेमा केही बोलेको यो पहिलो पटक हो । पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले भने जनरल मिलीको टिप्पणीमा कुही टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् । उनले भने ‘यो कुनै यस्तो प्रविधि होइन जसको बारेमा हामीलाई थाहा छैन ।’ किर्बीले अमेरिका आफ्नो सुरक्षा तन्त्र र हाइपरसोनिक प्रविधिमा काम गरिरहेको बताए ।
बेलायती अखबार फाइनान्सियल टाइम्सले केही समय पहिले एक समाचार प्रकाशित गर्दै चीनले अगष्ट महिनामा नै अन्तरिक्षबाट हाइपरसोनिक मिसाइलको गुपचुप परीक्षण गरेको खुलासा गरेको थियो । यो खबरले अमेरिकासहित विश्वका कैयौं देश चकित परेका थिए । यद्यपि चीनले यो कुरा अस्वीकार गरेको थियो र उसले यो कुनै मिसाइल परीक्षण नभइ अन्तरिक्षयानको परीक्षण भएको बताएको थियो ।
हाइपरसोनिक मिसाइलले आवाजको गतिभन्दा ५ गुणा गतिमा आक्रमण गर्न सक्छन् । यी मिसाइललाई एयर डिफेन्स सिस्टमबाट पहिचान गर्नु पनि निकै कठिन हुन्छ । गत हप्ता अमेरिकाले पनि हाइपरसोनिक मिसाइलको परीक्षण गरेका थिए । विश्वमा यो प्रविधि अहिले निकै कम देशहरुसँग मात्र छ ।
चीनको हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणको तुलना रुसको स्पुतनिक परीक्षणसँग यसकारण गरिँदैछ किनकि शीतयुद्धको क्रममा १९५७ मा रुसले स्पुतनिक स्याटेलाइन लञ्च गरेर अमेरिकाको मनमा यो डर उत्पन्न गरिदिएको थियो कि ऊ प्राविधिक रुपमा धेरै उन्नत भएको छ । यसको तत्कालै पनि अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले अमेरिकाले चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यात्री पठाउने घोषणा गरेका थिए । –एजेन्सीहरुको सहयोगमा